Sheeko jacayl ah oo macaan misana dhab ah - Cishqi.com
Waxa ugu quruxda badan ee la akhristo ayaa ah sheeko jacayl ah oo macaan qaasatan sheeko jacayl dhab ah oo qoraal ah, Sheekadani ayaa xambaarsan erayo jaceyl ah oo soo jiidasho leh, iyo fariin dareen jacayl ah.
Marka sheeko la soo hadal qaado, durbaba dad badani waxaa maskaxdooda ka soo maaxaneyso sheeko jacayl ah gaar ahaan mid xiiso leh.
Sheekadani ma ahan oo kaliya sheeko jacayl ah oo macaan ee sidoo kale waa sheeko ka turjumeyso jacayl dhab ah.
Qormadaan qormadii ka horeysay waxaan ku soo qaaday sheekooyin kuwaasoo ahaa kuwo qosol badan. Haddii aadan akhrisan sheekooyinkaasi aadka u macaan, hada halkaan ka akhriso: Sheekooyin qosol badan
Sheeko jacayl ah oo macaan
Cumaroow! Gabdhaha qurxoon, dadka iyagaa ugu farxad yar
Wiil xariif ah oo Yemeni ah, laguna magacaabo Cumar Al-Camuudi ayaa waxaa uu farriin shukaansi ah u diray gabadha lagu magacaabo Kiristiyan Baysari, taas oo ka warranta telefishanka Alhadath.
Ereyadii quruxda badnaa ee uu Cumar qoray awgood waxaa ay noqdeen kuwo lagu faafiyo Facebook iyo Twitter, jeer uu warkii gaaray gabadhii, waxaana ay lasoo xiriirtay Cumar, iyadoo uga mahadcelinaysa dareenka quruxda badan ee uu u muujiyey.
“Ma ogtahay in wiilka Yemeniga ah uu neceb yahay siyaasadda iyo hadal haynteeda? Saas oo ay tahay isaga oo amakaagsan uu adiga ku daawanayo isaga oo dhoollacadeynaya, adiguna markaa aad ka warramaysid hoogga iyo halaagga dalkiisa ka socda?
Dheh waxyaabahaas, waan rumaysanayaa, wararkaaga oo dhan waan rumaysanayaa, balaayo kasta oo aad sheegtidna baraare bay iigu muuqanayaan”.
“Waa Kiristiyaan. Waan akhriyey farriintaadii, mar baan dhoolla caddeeyey, laba goorna waan murugooday.
Waxa aan ku qoslay, dareenka haweeneed ee shukaansiga iyo ammaantu ka farxiso, haba qarsadaaneh.
Gabdhahayaga wariyeyaasha ah, qurux sidaa u badan ma lihin. Waxa aad arkeysid waa gacan ku samays, waxa aannu la murugoonna baalasha indhaha ee beenta ah marka ay naga dhacaan murug ka badan dhimashada dadka een warkooda tebinayno, baqdinta aan ka baqno in khalad farsamo naga dhoco ayaa ka badan baqdinta duqaymaha.
Waxa aannu nahay un boombaleyaal isku dareen ku sheega wararka murugta leh iyo kuwa farxadda leh, meherad caways ah oo lafuray iyo meydka toban carruur ah nooma kala duwana.
Ha igala bakhaylin fariin kale in aad ii soo dirtid. Iima aha fariin oo keli ah sida ay kula tahayba, waxa ay ii tahay tigid aan ku maro magaalooyinka iyo xeebaha qalbigeygu jeclaa, kuwaas oo aysan cid aanan idinka ahayn igeyn karin abwaanoow..